Ị nwetalarị tiketi gị maka mmemme egwu Julaị ndị a? | Bezzia
Ị nwetalarị tiketi gị maka mmemme egwu Julaị ndị a?
Maria onyekwere | 08/05/2022 22:00 | Akụkọ
N'oge okpomọkụ, ohere nke ịnụ ụtọ egwu ndụ na-amụba. N'ime ala ala anyị niile, ndị ememme egwu soro ibe anyị na-ekwe ka anyị na-agba àmà n'ime ụbọchị ole na ole concerts nke a nnukwu ọnụ ọgụgụ ndị na-ese ihe. N'ọnwa Julaị naanị, a ga-eme ihe dị ka mmemme iri atọ na mba anyị. Ị nwetalarị tiketi gị maka mmemme egwu Julaị ndị a?
2 ụda mbara ala
4 ememme sonic
5 Ememme dị ala
Bilbao BBK Live na-alọghachi mgbe ogologo oge enweghị ike iji ume ọhụrụ na mmetụta nke nnọkọ a na-atụ anya n'ụbọchị ahụ. Julaị 7, 8 na 9 na Kobetamendi. Akwụkwọ mmado Bilbao BBK Live 2022 ga-egosipụta ọnụnọ nke ndị na-ese ihe karịrị 100; site na kpakpando edoro nsọ ruo na nkwa na-ebili, na-ewusi ọtụtụ nka ike, akara ngosi nke ememme a.
Ememme a ga-enwe dị ka headliners LCD Soundsystem, J Balvin, Ndị na-egbu egbu, ụmụ nwoke ụlọ ahịa anụ ụlọ, Stromae, Ọkpụkpụ, MIA na Placebo. Agbakwunyere na ndị a bụ aha mba ụwa dịka Kelly Lee Owens, WOS, Romy ma ọ bụ Nilüfer Yanya na ndị nnọchiteanya sitere na steeti steeti dịka Zahara, Rigoberta Bandini, Alizzz, Cariño, Caribou, Venturi, Axolotes Mexicanos, LR na ịda mbà n'obi Sonora, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. .
Ị ka nwere oge ịzụta nke gị akwụ ụgwọ maka €155 maka mbipụta ememme a na-echere ogologo oge. Na tiketi ụbọchị dịkwa maka € 60 maka ụbọchị ọ bụla nke ememme ahụ, ezigbo ihe ọzọ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, iji nwee mmasị na ndị na-ese ihe kachasị amasị gị.
ụda mbara ala
Ememme Planeta Sound, nke emere site na stardust nke gbara El Bierzo n'ọgba aghara dị ka mmemme egwu izizi nwere onwe ya na Ponferrada, ekwenyela na ọ ga-alaghachi n'ọgbọ egwuregwu Coloman Trabado na. 15, 16 na 17 Julaị.
nnukwu ìgwè nke galaxy egwu spanish dị ka La MODA, Lori Meyers, Sidonie, Carlos Sadness, Recicled J, Dorian, Alizz ma ọ bụ Ladilla Rusa, n'etiti ndị ọzọ, na-eduzi mbipụta ọhụrụ a nke ememe nke a ka nwere tiketi.
Ị gaghị enwe ike ịzụta tiketi ụbọchị, mana tiketi oge niile maka € 66 nke ahụ ga-enye gị ohere ịnụ ụtọ ọtụtụ ndị na-ese ihe na-egosi na akwụkwọ mmado nke ememme a n'afọ a 2022. Echela ogologo oge ịzụta ha ma ọ bụ na ị ga-agbapụ na ha!
A na-eme FIB na Benicàssim kwa afọ kemgbe 1995. Mgbe nkwụsị nke ọrịa ahụ kpatara, ememme a ga-anabatakwa ọzọ. n'etiti July 14 na 17 na obodo Valencian "ọha na-adịghị ezu ike maka omenala egwu dị iche iche".
N'afọ a, ememme ahụ ga-apụta ndị nka mba ụwa guzobe ma na-apụta nke na-ekpochapụ eserese egwu dị ka Kasabian, Justice, Two Door Cinema Club, Mando Diao na Boys Noize Nathy Peluso, The Kooks, Becky Hill, Ihe Nlereanya, Tyga, Tom Grennan, The Hunna, Tom Walker, Declan Mckenna, Steve Aoki, Frequency efu ma ọ bụ Joel Corry.
A ga-enwekwa ohere na FIB maka ndị nka indie nke ihe nkiri spanish kacha mkpa nke oge. Na mgbakwunye na aha ụbọchị niile dị ka Love of Lesbian, IZAL, Zahara, Viva Sweden, Lori Meyers, La MODA, Dorian, Miss Caffeina na La Cámara Roja, a ga-agbakwunye atụmatụ ndị ọzọ na-apụta dị ka La La Love You ma ọ bụ Cariño.
Ị ka nwere ike nweta tiketi na tiketi ụbọchị maka ihe bụ otu n'ime ememme egwu kachasị mkpa na July. Taa mime gbanwere ọnụ ahịa tiketi; Ị nwere ike ịlele ọnụ ahịa ọhụrụ na ebe nrụọrụ weebụ ememme.
Ememme Sonica 2022 nke a ga-eme na obodo Cantabrian Castro-Urdiales na Julaị 15 na 16 Ọ na-atụ aro ka ị kwụsị izu ụka ka ị kwụsị ịgba egwu. Ememme a ga-egosipụta na ụgwọ ya nke mba ndị nwere onwe ha na ụdị egwu dị iche iche dị ka C. Tangana, La MODA, Viva Sweden, Carolina Durante ma ọ bụ Rigoberta Bandini, n'etiti ndị ọzọ.
Ị chọrọ ịbụ otu n'ime ndị na-ekpori ndụ egwu egwu a? Akwụkwọ ngafe na-enye ohere ịnweta saịtị mmemme na Julaị 15 na 16, 2022 bụ dị na €64. Ọ bụrụ na ịchọrọ tiketi ụbọchị, ị nwere ike nweta ya maka € 39.
Ememme dị ala
Ememme dị ala ga-alaghachi na Benidorm si Julaị 29-31, 2022 na egwu kacha mma nke mba na nke mba ụwa. Ejikọtara ya dị ka ememme kachasị zuru oke na mpaghara Levante, ọ na-enye ụbọchị atọ nke osimiri, anyanwụ na egwu ndụ na mpaghara karịa 30.000 m2.
N'afọ a ị nwere ike ịnụ ụtọ ihe nkiri Benidorm karịa 70 rock, pop na electronic artists. Metronomy, Nathy Peluso, Primal Scream, Izal, Amaia, Carolina Durante, Temples na ọtụtụ ndị na-ese ihe bụ aha ọhụrụ jikọtara na nso nso a: Ndị editọ, Dorian, Lewis OfMan, Chico Blanco, Dora, Bifannah na Reigning Sound. nweta nke gị tiketi ụbọchị atọ maka € 125 ma ọ bụ nzọ na tiketi ụbọchị maka € 35.
Ị na-aga ememme na Julaị? Ọ bụrụ na ị ka na-enweghị tiketi gị maka ememme egwu Julaị ndị a ma nwee mmasị na nke ọ bụla n'ime ha, egbula ogologo oge ịzụta nke gị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » Ị nwetalarị tiketi gị maka mmemme egwu Julaị ndị a?
Tinye agba na-ewu ewu na nke na-ewu ewu na uwe gị
Uru 5 nke collagen maka ntutu